Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Inotumira Tsitsi kuMhuri yaMelody Haughton-Adams
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Inotumira Tsitsi kuMhuri yaMelody Haughton-Adams
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett anopa runyaradzo rwechokwadi kuhama neshamwari dzaMelody Haughton-Adams, Mutungamiri weAll-Island Craft Traders and Producers Association, uyo ashaya nhasi nhasi zvichitevera kurwara.
Haughton anga ari Mutungamiriri weAll-Island Craft Traders uye Producers Association kweanopfuura makore makumi maviri.
Akashanda seMutungamiriri weHarbour Street Craft Market muMontego Bay kwemakumi emakore.
Melody anga achifarira kusimudzira indasitiri yehunyanzvi uye anga ari munhu akakosha muindasitiri yekushanya kwemakore.
“Melody anga aine mukurumbira muindasitiri yekushanyirwa kwemakore uye agara aine shungu dzekusimudzira indasitiri yemabasa emaoko. Akanga ari munhu anoshamisa achashayiwa zvechokwadi navose vaiva neropafadzo yokumuziva. Pachinzvimbo che Ministry of Tourism nemasangano ayo ese eruzhinji, naizvozvo, ndinopa nyaradzo kumhuri neshamwari dzake panguva ino yakaoma,” vakadaro Gurukota Bartlett.
Haughton anga ari Mutungamiriri weAll-Island Craft Traders and Producers Association kweanopfuura makore makumi maviri uye akashanda seMutungamiriri weHarbour Street Craft Market muMontego Bay kwemakumi emakore.
“Kuda kwaMelody kuindasitiri yemabasa emaoko, uye nekuwedzera kushanya, hakuenzaniswi uye indasitiri yedu hazvizove zvakafanana pasina iye. Mweya wavo ngauve nerunyararo naBaba vedu Vekudenga,” vakadaro Mushumiri Bartlett.